UDe Lille uthi uzoyilwa enkantolo eyokuxoshwa kwi-DA | News24
UDe Lille uthi uzoyilwa enkantolo eyokuxoshwa kwi-DA
UPatricia de Lille uthi uzoyilwa enkantolo eyokuthi iDemocratic Alliance ithathe isinqumo sokudabula isivumelwano sobulungu bakhe.
Isigungu esiphezulu seqembu simemezele ngoLwesibili ekuseni ukuthi uDe Lille akaselona ilungu le-DA ngenxa yokuphawula akwenza ngesikhathi emenywe emsakazweni i-702 neCape Talk.
Kule ngxoxo, uDe Lille waveza ukuthi uzoshiya i-DA, nokuyinto iqembu elithi iyaphambana noMthethosisekelo walo.
UDe Lille akazange apholise maseko njengoba naye ebize isithangami sabezindaba eziphendulela, wasola i-DA ngokuthatha izindlela ezinqamulelayo ekumxosheni.
Ube esememezela ukuthi uzosiphonsela inselelo enkantolo isinqumo se-DA sokumxosha.
Khonamanjalo, lowo oyibamba lemeya eKapa u-Ian Neilson ukhulume nabezindaba waveza ukuthi i-DA ithathe isinqumo sokufaka uDe Lille amasondo ngokushesha, okusho ukuthi akaselona ikhansela futhi akaseyona imeya.
UNeilson uthe alokhu ushintsho olungako oluzokwenzeka kulabo abebesebenza eduze noDe Lille.
Uthe abanye bazoqhubeka ezikhundleni abazibambile, kepha lokho kungokwesikhashana.